Bilow Bilow 4 Adiga
Wac hadda - 024 7767 1470
Shaqo qorista Jaamacadda
Tababarka iyo Tababarrada
Mashruuc la maal galiyay
Koorsooyinka iyo Aqoon-isweydaarsiga
Nagala soo baxa waxaad ku gaadhi doontaa yoolalkaaga oo aad mustaqbal aamin doontaa!
La-talinta Macluumaadka Xirfadda iyo Hanuuninta
Koorsooyinka iyo Aqoonta
English Courses – ESOL, General English, IELTS preparation, Business English
Shaqo qorista Jaamacadda oo leh taageero bilaash ah, talo iyo hagitaan
Shaqaalaynta, dhiirrigelinta iyo kalsoonida aqoon isweydaarsiga
Taageero luqado badan oo loogu talagalay muhaajiriinta Yurubta Bari
Tabarucid iyo horumarinta bulshada
In ka badan 95% macaamiisheena ayaa noloshooda beddelay si ka sii wanaagsan
Dhamaan mashruucyadeena maalgalinta ayaa si guul leh lagu soo gabagabeeyey
Waxaan gaarsiinaa aqoonsi qaran ahaan la aqoonsan yahay
Maareeyaha Maamulka ee New Start 4U
“ The aim of our Centre is to help migrants who settled down in the UK with all aspects of their everyday life. We believe that with the right help, anything can be achieved with great results. Please watch our introduction video to learn more about our community “
Mashaariicda la Maalgeliyey
Wax ku barashada UK
Haddii aad rabto inaad wax ku barato England, fadlan nala soo xiriir annagana kaa caawin doona foomka dalabka, maalgelinta ardayda iyo diyaarinta wareysiga.
Latalin xirfadeed oo bilaash ah
Xisaabta iyo shahaadooyinka Ingiriisiga ayaa laga heli karaa xarunteenna (shuruudaha gelitaanka)
Caawinta foomamka dalabka iyo diyaarinta wareysiga
Help with student finance (university fee and maintenance loan for living costs)
No age limit, you can start University even if you are a mature student
Full time and part time, undergraduate and postgraduate courses
Suuqa Shaqada & Shaqada Dheeriga ah
Dib ugusoo noqosho aduunyada ka hor safka hore. Dhawr bilood gudahood, mudnaanta ayaa isbaddelay ku dhowaad qayb kasta oo nolosheena ah. Intii aad la qabsanaysay noocyada kale ee […]
Fasalada Sawirka & Farshaxanka ee dhalinyarada
3da Oktoobar 2020 waxaan bilaabi doonnaa fasalo 4U ah oo Farshaxanka iyo Sawirka ah oo loogu talagalay dhalinyarada da'doodu tahay 13-18 sano New Start 4U! Koorsooyinka aan u diyaarinay dhalinyarada waa […]
10ka maado ee ugu caansan jaamacadda!
Soo helida Tobanka Maadadood ee ugu caansan Jaamacadaha, waa mid ka mid ah dariiqooyinka ugu fudud ee lagu ogaan karo jaamacadaha ku yaal Boqortooyada Ingiriiska, iyo maadooyinkooda, kuwa ugu fiican adiga…
”Caawinaad xirfad leh iyo meel aad ufiican oo talo laga helo. Haddii aad u baahan tahay in laga caawiyo CV-ga waa meesha aad sidoo kale u baahan tahay. Had iyo jeer dib-u-soo-dhigid iyo waqti kugu hello taleefan, Skype ama ballan fool ka fool ah. Meel fiican! “
”Waxaa haboon inaad naftaada maal gashato! Ururkani wuxuu ku siin doonaa fursaddan. Marnaba kuma caajisin inta lagu gudajiro casharrada, macallimiintu aad bay wax u tarayeen dhammaantoodna jawi wanaagsan ayey la joogeen dadka runtii doonayay inay wax bartaan. Halkaas ayaan ku noqon doonaa mar uun. 🙂 “
”Waxaan aad ugu boorinayaa Xarunta NewStart4U! Dadka saaxiibtinimada leh, diyaarna u ah inay caawiyaan qof walba! Macallimiin waaweyn, oo fasallada Ingiriisiga ka dhiga mid aad u xiiso badan! Waxaan kugula talinayaa inaad iska hubiso shaqsi ahaan! “
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Siyaasadda cookies
Isniin-Jimco: 10 AM-2PM &
2019 Bilowga Cusub 4 Adiga
Waxaan isticmaalnaa cookies si loo hubiyo in aan ku siin waayo-aragnimo ugu fiican ee website-kayaga. Haddii aad sii isticmaasho this site waxaan u qaadan doonaa in aad ku faraxsan la jira.OkNidaamka buskudka